Ma'suriWhitening Sun Lotion - 60 ML | အွန်လိုင်း SHOP.COM.MM တွင် ၀ယ်ယူမည်
Ma'suri Whitening Sun Lotion - 60 ML
ပျက်စီးနေသော ဆဲလ်များကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးခြင်း
The must-have item for this summer. Not sticky when apply and the price is reasonable too. နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
Ma'suri အမှတ်တံဆိပ် Whitening Sun Lotion သည် ရေဓာတ်ကိုအခြေခံပြီးထုတ်လုပ်ထားသော lotion type Sun Cream ဖြစ်ပြီး တစ်နေ့တာလုံး စေးကပ်ခြင်း၊ အဆီပြန်ခြင်းတို့မရှိစေဘဲ နေရောင်ခြည်ဒဏ်မှ အပြည့်အ၀ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ရှားစောင်းလက်ပတ် ပါဝင်သောကြောင့် နေလောင်ကွက်များကိုသက်သာပျောက်ကင်းစေပြီး အသားအရေကိုအေးမြစေပါသည်။ စပျစ်သီးတွင်ပါဝင်သည့် ဗီတာမင်များကလည်း နေရောင်ခြည်ကြောင့်ဖြစ်ပ်ါထားသော ဆဲလ်ပျက်စီးမှုများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပေးပါသည်။ SPF 30 နှင့် PA +++ ပါဝင်ပြီး နေ့စဉ်သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ - နေရောင်ခြည်နှင့် မထိတွေ့မီ ငါးမိနစ်ခန့် ကြိုလိမ်းပါ။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်မျိုးရရှိစေရန် လေးနာရီကြာ တစ်ခါပြန်လိမ်းပါ။
ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက် Whitening Sun Lotion - 60 ML